ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တိုကျို ၂၀၂၀ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပရန် ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြော - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ ၂၀၂၀ တိုကျို အိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက် အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော အဓိကမီဒီယာစင်တာ (MPC) ဝင်ပေါက်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တိုကျို၊ ဇူလိုင် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီဒဲ ဆူဂါက COVID-19 ရောဂါ ပျံနှံ့နေသည့်ကြားမှ တိုကျိုအိုလံပစ် အားကစားပွဲများအား အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။“မနှစ်ကကတည်းက COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ပေါ့ ။ ကပ်ရောဂါအခြေအနေက တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ တော့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေရှိတာပေါ့။ သို့သော်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းတွေက ရောက်ရှိလာတော့မှာမို့ မှောင်မိုက်မှုကြီးပြီးတဲ့နောက် အခုတော့ ထွက်ပေါက်အလင်းရောင်ကို မြင်တွေ့နေရပြီ” ဟု ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ၁၃၈ ကြိမ်မြောက် IOC အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား မကြေညာမီ တာဝန်ရှိသူများအား ဆူဂါက ပြောခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာကြီးက ကြီးမားတဲ့ခက်ခဲမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အခုကတော့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ ဉာဏ်ပညာနဲ့ စုစည်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားကစားပွဲတွေကို ကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အားကစားပွဲတွေကို ကျင်းပပြီး အောင်မြင်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“နေရာအတော်များများမှာတော့ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိုကျိုအားကစားပွဲများရဲ့ အရေးပါမှုက ဘယ်တော့မှ အားလျော့ ပျက်ပြယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအားကစားပွဲတွေမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက လူပေါင်း ၄.၉ ဘီလီယံလောက်က တီဗီဖန်သားပြင်တွေကနေ မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တိုကျိုမြို့သည် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစတင်၍ ဩဂုတ် ၂၂ ရက်အထိ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားပြီး တိုကျိုအိုလံပစ် ကာလအတွင်း လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနှစ် အားကစားပွဲတွေကတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီအားကစားပွဲတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အားကစားပွဲတွေနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ ဂျပန် ပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်သွားဖို့ အတွက် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အားကစားသမားတွေနဲ့ ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ပါတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
တိုကျိုတွင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က လက်ခံကျင်းပခဲ့သော အိုလံပစ်အားကစားပွဲအား ပြန်ပြောင်းသတိရလျက် ဆူဂါက ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ထိုအချိန်က အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်သာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (Xinhua)
TOKYO, July 20 (Xinhua) — Japanese Prime Minister Yoshihide Suga has expressed his confidence in successfully delivering the Tokyo Olympic Games despite the specter of COVID-19.
“Because of the COVID-19 pandemic since last year, the (pandemic) situation is making progress and sometimes backwards, but vaccinations have come. Afteralong tunnel, an exit is now in our sight,” Suga told officials before declaring the opening of the 138th IOC Session here on Tuesday.
“The world is faced with great difficulty,” he admitted. “Now is the time that we have to remain united, and with the efforts and wisdom of mankind, we will have to deliver the Games. We can do that, and we can bring success to the delivery of the Games.
“In many venues there will be no spectators, but the significance of Tokyo will never be hampered or reduced. In this Games, 4.9 billion people around the world will be riveted to their TV screens,” he said.
Tokyo’s fourth State of Emergency began on July 12 and will last until August 22, meaning it will cover the duration of the Tokyo Olympics.
“There are many constraints in this year’s Games, and these Games are different from past Games. We will protect the health and security of the Japanese public, and at the same time those of the athletes and stakeholders. I need your cooperation,” Suga noted.
Suga also recalled Tokyo’s previous hosting of the Olympic Games in 1964, when he wasahigh school student. Enditem
Photo : The picture taken on July 1, 2021 shows the entrance of the newly opened Main Press Center (MPC) for the 2020 Tokyo Olympic Games in Tokyo, Japan. (Xinhua/Hua Yi)